ओमानले दियो नेपाललाई १९८ रनको लक्ष्य, सन्दीप विकेटविहीन ! यो जित कस्को ? - News20 Media
ओमानले दियो नेपाललाई १९८ रनको लक्ष्य, सन्दीप विकेटविहीन ! यो जित कस्को ?
February 5, 2020 February 5, 2020 N20LeaveaComment on ओमानले दियो नेपाललाई १९८ रनको लक्ष्य, सन्दीप विकेटविहीन ! यो जित कस्को ?
काठमाडौँ । आइसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग टु अन्तर्गत ओमानविरुद्धको खेलमा नेपालले १ सय ९८ रनको लक्ष्य पाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा बुधबार बिहान सुरु भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित ५० ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा १९७ रनको योगफल तयार पारेको हो ।
ओमानका लागि मोहम्मद नदीमले अद्र्धशतकीय पारी खेलेका थिए । उनले ६९ रन बनाए । त्यस अतिरिक्त सन्दीप गौडले ३३, मुहम्मद नसिमले २८, जसिम मकसुदले २० र अकिब इल्यासले १६ रन बनाए ।
बलिङतर्फ नेपालका सुशन भारी किफायती साबित भए । उनले १० ओभरमा १४ रनमात्र खर्चिएर तीन विकेट लिए । ‘विकेट टेकर’का रुपमा करण केसी प्रभावशाली रहे । उनले चार विकेट हात पारे । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले एक विकेट हात पारे । १० ओभर बलिङ गरेका सन्दीप लामिछाने भने विकेटविहीन रहे । उनले ४५ रन खर्चिए ।
माघ २९ गतेसम्म चल्ने त्रिकोणात्मक शृंखलामा कुल ६ खेल हुनेछन्। हरेक टोलीले समान दुई/दुई खेल्ने तालिका छ। बुधबार पहिलो खेल नेपालले पाहुना टोलीसँग खेल्दा दोस्रो खेल अमेरिकासँग माघ २५ गते शनिबार खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेल नेपालले ओमानसँग माघ २६ र चौथो तथा अन्तिम खेल अमेरिकासँग माघ २९ गते खेल्ने तालिका छ।
ओमान २०१२ पछि पहिलो पटक नेपाल आएको हो। सन् २०२३ को एकदिवसीय विश्वकपको रोडम्यापको रूपमा समेत रहेको यस विश्वकप लिग–२ मा नेपालको यो पहिलो शृंखला हो। यसअघि नै दुई सिरिज खेलिसकेको अमेरिका ८ खेलबाट १२ अंक जोड्दै अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा छ। ओमान ८ अंकसहित चौथो स्थानमा छ। सन् २०१८ मा पहिलो पटक एकदिवसीय मान्यता पाएपछि नेपालले घरेलु मैदानमा एकदिवसीय शृंखला खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो भने समग्रमा नेपालको तेस्रो एकदिवसीय शृंखला हो।
पहिलो पटक सन् २००८ को डिभिजन पाँचमा आमने सामना भएका अमेरिका र नेपाल ११ पटक एकदिवसीयमा आमनेसामने भएका छन्। जसमा नेपालले पाँच पटक जितेको छ भने अमेरिकाले तीन खेल जितेको छ। तीन खेल भने नतिजाविहीन भएका छन्। अभ्यासका लागि भएको खेलमा नेपाल प्रेसिडेन्ट–११ ले अमेरिकाको राष्ट्रिय टोलीमाथि मंगलबार जित निकालेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको १ सय १२ रनको लक्ष्यसहित जबाफी ब्याटिङ गरेको अमेरिका ३२.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र ७४ रनमा समेटिँदा नेपाल ३७ रनले विजयी भएको हो।
ब्याटिङ फ्लप हुदाँ ओमानसँग नेपाल पराजित, १९८ रनको झिनो लक्ष्य पनि भेटाएन
यस्तो छ नेपालमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने नेपाल, ओमान र अमेरिकाको टिम ( नामावली सहित )
January 22, 2020 N20